पूर्वअर्थमन्त्री डा. महतकाे ‘नेपालको अर्थराजनीतिः परीक्षण, कम्पन र आशा’ प्रकाशित
नेपाली पब्लिक शनिबार, असोज १०, २०७७
काठमाडौं– पूर्वअर्थमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता डा. रामशरण महतद्वारा लिखित ‘नेपालको अर्थराजनीतिः परीक्षण, कम्पन र आशा’ पुस्तक प्रकाशित भएको छ । केही महिनाअघि सार्वजनिक गरिएको डा. महतको ‘ट्रियल्स, ट्रेमोर्स एन्ड होप : पोलिटिकल इकोनोमी अफ कन्टेम्पोररी नेपाल’ नामक अङ्ग्रेजी पुस्तकलाई नेपाली भाषामा प्रकाशित गरिएको हो । पत्रकार गजेन्द्र विष्टले उक्त पुस्तकलाई नेपालीमा अनुवाद गरेका हुन् ।
पुस्तकको अङ्ग्रेजी संस्करणलाई भारतको एड्रोइट पब्लिसर्सले प्रकाशनमा ल्याएको थियो । डा. महतले मकालु प्रकाशन गृहलाई धन्यवाद दिएका छन् । प्रकाशन गृहका अध्यक्ष वासुदेव ढकालले पूर्व अर्थमन्त्री तथा कांग्रेसका नेता डा. महतको पुस्तक प्रकाशन गर्न पाएकामा खुसी व्यक्त गर्दै कोभिडको महामारी र प्रतिकूलताबीच पुस्तकलाई सर्वसाधारणको पहुँचमा पु¥याइने बताए ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, असोज १०, २०७७ १२:०८